Mibro Agba Smartwatch, nyocha, nkọwa na ọnụahịa | Gam akporosis
Mibro Agba Smartwatch, nyocha, nkọwa na ọnụahịa
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Nyocha
Taa, anyị laghachiri Androidsis yana nyocha nke smartwatch mbinye aka ama ama, nke Agba Mibro. Ọnwa ole na ole gara aga anyị gbalịrị ịgwa gị ihe niile banyere ya Mibro Ikuku, nke dị n’oge ahụ dị ọnụ ala smartwatch na ahịa. Ugbu a ọ bụ oge onye ọhụụ ọhụrụ nke Mibro, ụlọ ọrụ nke Xiaomi nwere nke na-aga n'ihu na-emepụta ngwaahịa na-atọ ụtọ na ọnụahịa ndị ọzọ mara mma.
Na Mibro Agba atụmatụ a dị nnọọ iche imewe na Air Mibro na nke ahụ na-awụpụ na ya okirikiri usoro, nke na nke a dị ka akụkụ anọ udi. Anyị na-ahụ a obere kọmpat o yikwara ka o siri ike. Mere na ihe na-enye ezigbo emecha ha dịkwa ụtọ nke ukwuu maka taco.
1 Mibro Agba, mmalite na ọganiihu ama ama
2 Unboxing nke Agba Mibro
3 Nhazi nke Mibro ọhụrụ
4 Njirimara nke Mibro Color nyere
5 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Mibro Agba, mmalite na ọganiihu ama ama
Anyị enweghị nhọrọ ma ọ bụghị iji tụnyere Mibro ọhụrụ a na onye bu ya ụzọ. Ọ bụ ezie na anyị maara na iji onwe anyị atụnyere ndị ọzọ bụ asị, ọ bụrụ na anyị eleba anya n’otu n’otu Na ngalaba ndị a ga-enyocha, anyị nwere ike ikwu nke ahụ na Mibro Agba na-ewere ihe dị mkpa na-aga n'ihu. Ntughari na mmelite di oke nma, ma nke kasi nma, nke a adighi emetuta ugwo ya ma oli. Nwere ike ịzụta nke ọhụrụ Agba Mibro maka ihe na-erughị euro 30.
na ndozi dị ịrịba ama na-abata n'ụdị atụmatụ ọhụrụ na-akwadebe ma mezue smartwatch nke na-aghọ ihe na-atọ ụtọ mgbe ụfọdụ. Ma enweghị obi abụọ, na ọ na integrates a SpO2 mmetụta na-eme ka ọ pụta ìhè n'etiti ndị niile yi uwe nwere ike idowe n'otu ọnụahịa ahụ. A ka nwere elele ole na ole gụnyere ụdị teknụzụ a, ọbụlagodi n'etiti ndị kachasị amara ma dị oke ọnụ.
Mgbe anyị mechara kpebie ime ihe elekere igwe elekere, enwere ọtụtụ obi abụọ anyị nwere ike ịchọta. Ma otu oge iji tụnyere uru nke nhọrọ dị na ahịa, ma e wezụga atụmatụ ahụ, ndị a na-ewere ebe kachasị mkpa. Ebe a na Mibro Agba, mpi si gị ka ị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ nhọrọ na-enye ọtụtụ ihe pere mpe.
Unboxing nke Agba Mibro
Ọ bụrịrị ama ama na anyị achọghị ịhapụ, oge eruola ka ị lee igbe Mibro Ikuku ma gwa gị ihe niile anyị hụrụ. Dị ka atụrụ anya, efu ịtụnanya. N'ihu ihu anyị na-ahụ Mibro Agba agba nke echekwara nke ọma. N'ebe anyị nọ, ihe nlereanya anyị natara nwere ọchịchịrị isi awọ na eriri ojii.
Waya chaja Ọ na-agbanwe n'ihe banyere Mibro Air. Anyị chọtara a USB na-agwụcha na obere isi iyi magnetized ụgwọ na abụọ atụdo na-ezuru oke na n'ụzọ dị mfe. Maka ndị ọzọ, anyị hụrụ a obere ndu maka ntinye na akwụkwọ metụtara nkwa. N'okwu a anyị enweghị mgbaaka mgbakwunye. Ọ bụ ezie na ọ nwere kpochapụwo emechi na a size na anyị nwere ike na-akpọ ọkọlọtọ.
El Agba Mibro ọ nwere ike ịbụ nke gị na erughị euro 30
Nhazi nke Mibro ọhụrụ
Anyị na-ele anya na imewe nke Mibro Agba na-enye na ọdịdị ahụ ọ na-egosi. Dị ka anyị kwuru na mbido, ọ na-aga site na ọkpụkpọ gburugburu na Mibro Ikuku gaa na akụkụ akụkụ anọ na Agba Mibro ọhụrụ. Agbanyeghi na imewe oku otiti na otutu okwu bu ihe uto, Dị ka a na-achị, a square ihuenyo na-ewe ndị ọzọ uru nke ya elu na akara ngosi na ozi.
Na mkpokọta okwu anyị nwere ike ikwu na Mibro ọhụrụ nwere a ọgụgụ isi na-enweghị atụ. Agba ha, nke kacha nta na nke a, na ụdị ha na-adọta obere nlebara anya. Ezigbo maka ndị na-ahọrọ ngwaọrụ nke pụtara maka ihe ọ na-enye, nke karịrị karịa maka ihe ọ pụtara. Tụle ọkpụrụkpụ, okirikiri abụghị karịsịa oké, kama ọ ga-agafe dị gịrịgịrị.
Ihuenyo na-enye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ ebe ọ nwere nchapụta ogo nke na-eme ka ọ pụta ìhè n'ụzọ zuru oke ọbụlagodi na ìhè anyanwụ na-enwu gbaa. Jiri otu gụọ 1,57 nke anụ ọhịa ahụ na akụkụ anọ, nnabata a nabatara, ọ bụghị obere, mana ọ bụghị nnukwu. Ya HD mkpebi eme ka gị na ihuenyo n'ụzọ zuru oke doro anya na ke ngutali niile.
Atụmatụ gburugburu a obere etiti na gburugburu ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị ejiri okirikiri nwere ndabere nke agba ọzọ, ọ na-eme ka ọ dị obere. Ọ nwere curved onu nchupu nke mere na ọ na-integrates were were n'ime ígwè ahu. Ọ bụ ezie na nke a na-eme ka ọ dị ka ihe na-emebi emebi ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ obere ahụhụ. Na njikwa akara aka dị irè ma na-emeghachi ozugbo na-enweghị na-pịa na na lags efu.
Agba Mibro nwere otu bọtịnụ anụ ahụ nke dị n'akụkụ aka nri. Gụnyere bọtịnụ na gbanyụọ, na-eje ozi dị ka bọtịnụ home.
Na ala anyị na-ahụ obi usu ihe mmetụta ọzọ kwa SpO2 mmetụta, ma na ezigbo nzaghachi. Ha na-enye ozi a pụrụ ịdabere na ya nke anyị nweela ọdịiche dị ngwa na n'ụzọ doro anya. O doro anya na ezigbo "pro" iji tụlee. E nwekwara ndị magnetized Nchaji atụdo.
Belt ahụ nke Mibro Agba, dị ka nke ọzọ nke elekere, agaghị apụta ìhè maka imepụta ya. N'okwu a, anyị nwetara ụdị ojii. Ma ụdị ndị ọzọ ga-enye elekere anya na-adịcha mma ma na-eto eto. Na a obosara dị ka ngwaọrụ, ọ bụ nke silicone nke na-adi mma diri aka ọ na-enyekwa mmetụ dị nro, ọ bụ ezie na ikekwe ntakịrị pere mpe. Ọ nwere taabụ iji tinye, wepu ma ọ bụ gbanwere ngwa ngwa.
Njirimara nke Mibro Color nyere
Anyị ga-amalite site na-ekwu banyere SpO2 mmetụta nke ejiri Mibro Agba. Ma gịnị bụ ihe mmetụta SpO2? Ọ bụrụ na ị maghị, eji tụọ oke oxygen dị n'ọbara. Fọdụ ụkpụrụ nke ndị raara onwe ha nye egwuregwu na-enwe ekele dị ukwuu ndị ọkachamara, ma ọ bụ ndị chọrọ ịchịkwa ya mgbe ha na-emega ahụ. Ihe mgbakwunye nke smartwatches ole na ole nwere ugbu a, na-erughị ala na-echebara ọnụahịa ọnụahịa nke agba Mibro dị.
La njikọta o bukwa ihe gbakwunyere. Ejiri agba 5.0 Bluetooth, ya mere, anyị nwere njikọ kwụrụ ọtọ na enweghị njikọ mgbe niile. Maka gị ndozi, onye na-emepụta ihe na-atụ aro ka anyị mee site na Ngwa, dị mma karịa site na ntọala nke ekwentị anyị. Ejiri njikọ ahụ na sekọnd ole na ole ngwa ngwa na nghọta. Smartwatch ị na-achọ naanị ụgwọ € 30, zụta ugbu a zụta Mibro gị ugbu a.
Ọ bụrụ na i lee anya na nnwere onwe nke ahụ nwere ike ịchụ àjà, anyị chọtakwara data dị mma. Na batrị ụgwọ nke 270 mAh, nke a priori nwere ike iyi ka ọ dị ụkọ, Mibro Agba na-enye ruo ụbọchị 14 zuru ezu ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị. Obi abụọ adịghị ya, ndekọ ndị na-eme ka ọ bụrụ smartwatch na nnwere onwe magburu onwe ya.
Na mgbakwunye na otu esi sie ike igwe ya, ma ọ bụ eriri silicone, anyị ga-ekwukwa banyere mgbochi mmiri. Agafee asambodo IP, Mibro Agba bụ smartwatch submersible na-akwado ruo 5 ATM nke nrụgide. Ezigbo weara iji soro anyị n'egwuregwu anyị n'agbanyeghị ụdị ọ nwere ike ịbụ. Ọ bụghị n'efu ka anyị na-achọta ihe ndekọ egwuregwu 15 dị. You pụrụ ịhụ ezumike nke Ama na weebụsaịtị.
Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Ihuenyo 1.57 "
Nguzogide mmiri / uzuzu submerible 5 igwe ndọrọ ego
Njikọ Bluetooth 5.0
Batrị 270 mAh
Onwe ya ruo ụbọchị 14 iji ya
Akụkụ ahụ 43 x 35 mm
Okpukpo aru 10.2mm
Akụkụ eriri 252mm ogologo na 20mm obosara
Ibu ibu 52 grams
Ahịa 29.65 €
Linkzụta njikọ Agba Mibro
Mibro na-aga n'ihu na-enye ngwaahịa dị mma na ezigbo ọnụahịa.
Uru dị na ya ma ọ bụ mee ka ị pụọ na asọmpi gị.
Nnwere onwe nke ụbọchị 14 iji.
Enweghi nchebe ma akụkụ nke ihuenyo ahụ anaghị echekwa ma ọ na-apụta na-emebi emebi.
Eriri ahụ dị gịrịgịrị ma nwekwaa mgbanwe karịa ka atụrụ anya.
Ngosipụta emebi emebi
Dị ezigbo mkpa eriri
Mibro Agba Smartwatch
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Mibro Agba Smartwatch, nyocha, nkọwa na ọnụahịa
Ngwa kachasị mma iji sonyere vidiyo na gam akporo
Ọ bụrụ n’ị na-achọ igwe nwere igwefoto mara mma, echefula Cubot X50